चर्चित बाल गायक आयुश केसीको धमाकेदार गीत सार्वजनिक ! - Everest Dainik - News from Nepal
चर्चित बाल गायक आयुश केसीको धमाकेदार गीत सार्वजनिक !
काठमाडौं । नेपाली गीत–संगीतका किंग राई ईज किंग राजेश पायल राईले गाएको लोकप्रिय गीत ‘तिमीलाई मन पराउनु मेरो गल्ती होइन’ लाई चर्चित बाल गायक आयुष केसीले भर्खरै आफ्नो सुमधुर स्वर दिएका छन ।
बहुचर्चित गीतकार दर्पण राईको शब्दले लिपीबद्ध रहेको उक्त गीत महेन्द्र राईको मृदु संगीतले लयबद्ध छ ।
उनको यो सुमधुर सुन्नका लागि तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्–